Sida loo Beddelaan Ustream in MP3 ee One Click?
> Resource > Video > Sida loo Beddelaan Ustream in MP3 la Click ah
Baahi weyn jirto software taariikhqorihii il audio smart in dadka isticmaala isticmaali kartaa inay soo saaro audio ka Ustream videos in MP3 for loo maqli on MP3 ciyaartoyda. Haddii aad sidoo kale raadinaya barnaamij lagu soo bixi Ustream audio, Wondershare AllMyTube for Mac ( AllMyTube ) waa Ustream in MP3 Converter ugu fiican ee aad u.
Fiiro gaar ah: AllMyTube iyo AllMyTube for Mac ma taageeri degsado Ustream videos hadda. Laakiin waxa aan ku dhibtoonayo inuu helo mar kale shaqeeyaan. Sorry u keenaya dhibaato iyo fadlan ka raadi Google xal kale caawimaad.
App waxaa loogu tala galay in ay soo bixi videos ka dhow wax goobaha video caan ah, oo ay ku jiraan Ustream. Ka sokow video download, waxa kale oo uu awood u leeyahay inuu u rogo online videos in ku dhow wax video & qaab maqal ah la lahayn video ama tayada audio. Sidaas, waxaad u isticmaali kartaa si toos ah lagaaga caawiyo in aad kala soo bixi Ustream in MP3 loogu isticmaalo. Iyo habka ay tahay oo keliya mid ka mid click fudud.
1 Orod Ustream si MP3 Converter dooro MP3 format sida wax soo saarka
Orod this downloader weyn Ustream, u tag interface dajinta ay, ka dibna beddelaan on "Download markaas Beddelaan" biiro ku taalla geeska sare ee midigta ah interface-ka. Isla markiiba, qaab wax soo saarka suuqa kala pop-up la arbushin doonaa. Wakhtigan, aad u baahan tahay si ay u tagaan "Audio" category iyo MP3 xusho.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad kala soo bixi Ustream videos si kasta oo kale oo qaab video & audio, halkan, kaliya aad doorato qaabka aad rabto in aad si gaar ah halkii.
2 Tag www.ustream.tv
Fur browser sida Chrome, Firefox, ama IE aad. Ogsoonow in aad u baahan tahay in dib loo bilaabo biraawsarkaaga ka dib markii aad ku rakiban this app weyn, qaar ka mid ah browser fur-tago in la cusboonaysiiyaa doonaa. Markaas, waxaad tagtaa ustream.tv oo la helo Ustream videos aad rabto.
3 Download iyo badalo Ustream in MP3 in mid ka mid click
Ka dib markii aad furto diirada Ustream video ku saabsan goobta, waxaad kaliya caawi- maadda aad ka badan geeska gacanta midigta sare ee video ah, ka dibna si fudud riix badhanka Download muuqashada waxaa. Markiiba, app waxaa laga bilaabayaa degsado Ustream videos ka dibna lama filaan ah diinta bixi Ustream videos in MP3 aad u.
Marka uu sameeyo, la furo folder wax soo saarka si aad u hesho MP3 Ustream ee files. Ku raaxeyso ah!
Bal aan daawado tutorial video hoos ku qoran:
Tip dheeraad ah: Ka dib markii diinta video Ustream in ay file MP3, aad rabto in aad ku darto macluumaad buuxa si music ah. Markaas Wondershare TidyMyMusic u Mac noqon kartaa kaalmo weyn. Waxaa dhammaan macluumaadka oo ay ku jiraan horyaalka, artist, farshaxanka album iyo xitaa lyrics si toos ah u maktabadda music oo dhan aad ka heli kartaa. Waa maxay dheeraad ah, waxaad u samayn kartaa in Dufcaddii.
Download barnaamijkan ka hoos ku qoran:
10 Dariiqo oo Samee GIF ka Videos
Video Editor Cool: Sida loo dar Cool Raadka in Video
Splice Video Editor u PC: Si fudud Edit Videos on PC